ဆုတောင်းချက်၌ဖွင့်ပွိုင့် - ဘုရားသခငျ့ဆုတောငျးလကျြ
ဆုတောင်းပဌနာကိုအများဆုံးရတာဟာနှင့်အသက်တာ၌အများဆုံးစိတ်ရှုပ်စရာအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင့သင်၏ပဌနာဖွကွေားသောအခါ, အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့သောခံစားမှုပါပဲ။ အဆိုပါဠာ၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဆင်းရောက်ရှိနေပြီနှင့်သင့်အသက်တာ၌အလုပ်လုပ်ခဲ့သောကွောငျ့သင်မှင်တက်မိရက်များအတွက်န်းကျင်တိမ်းယိမ်း။ သူသည်သင်တို့ကိုချစ်သောသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့: သင်တစ်အံ့ဖွယ်အကြီးတွေသို့မဟုတ်သေးငယ်ဖြစ်ပျက်ကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏ရုံတစျခုအကြောင်းပြချက်ထိုသို့ပြုကြသည်ကိုငါသိ၏။ သင်၏ခြေနောက်ဆုံးတော့မြေပြင်ကိုထိလိုက်တဲ့အခါ, သင်ကအရေးပါသညျ့မေးခှနျးကိုမေးရန်လုံလောက်သောရှည်လျားနံရံများသို့တိုးမြှင့်ရပ်တန့်: "? ငါဘယ်လိုကြောင့်နောက်တဖန်အဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်"
ဒါကြောင့်မကြာခဏကြှနျုပျတို့ဆုတောငျး ပါဟုလျှောက်ရကြဘူး ကျနော်တို့လုပ်ချင်တဲ့လမ်း။ သောအမှုဖွင့်သောအခါ, အဲဒါကိုမျက်ရည်ရန်သင့်အားမောင်းနှင်နိုင်အောင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုငြင်းကောင်းသော-တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, တစ်ဦးအလုပ်, ဒါမှမဟုတ်အရေးပါသောဆက်ဆံရေးဟာပွငျအတှကျဘုရားသခငျကိုမေးမြန်းသည့်အခါဒါဟာအထူးသဖြင့်ခက်ခဲပါတယ်။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျခငျြတလမ်းမှမထူးသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားမလညျနိုငျပါသညျ။ သင်သည်သူတို့၏ပဌနာရတဲ့အခြားလူများပြန်လျှောက်နှင့်သင်မေးကြည့်ရှု "ဘာကြောင့်ငါ့ကို?"
ထိုအခါသင်သည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏အသက်တာအတွက်အချို့ဝှက်ထားသောအပွစျကိုကွားထံမှဘုရားသခငျသညျစောင့်စဉ်းစား, ကိုယ့်ကိုယ်ဒုတိယ-ခန့်မှန်းဖို့စတင်ပါ။ သင်ကစဉ်းစားနိုင်လျှင်, ကဝန်ခံနှင့် နောင်တရ က၏။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကငါတို့ရှိသမျှသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုဖြစ်ကြပြီးအပြစ်တရား၏လုံးဝအခမဲ့ဘုရားသခငျသညျရှေ့တျောသို့ရောဘယ်တော့မှနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအာမခံ သညျယရှေုခရစျသ ဘုရားသခင်ကိုမသိ, မိမိအဘခမည်းတော်သည်သူ၏သားတော်ကိုဘာမျှမငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သူအစက်မရှိသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို။
အခါတိုင်းသုံးရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထွက်လာ: ကျနော်တို့ဆုတောငျးလကျြနေတဲ့ကိတ်မုန့်ရောနှောဖုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအမှုကိုအကတိပေးသမျှသောစာအုပ်များနေသော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာလိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုအာမခံဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်မျှလျှို့ဝှက်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလည်းမရှိ။
စိတျထဲမှာရှိသမျှသောအမှုနှင့်အတူငါတို့သည်အဘယ်သို့လေ့ကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးအတူသောစိတ်ပျက်ရှောင်ရှားနိုင်သလဲ ကျွန်မအဖြေကိုယရှေုသညျဆုတောငျးလေ၏လမ်းကိုလေ့လာနေတည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှသိလျှင် ဆုတောင်းဖို့ဘယ်လောက် , ယရှေုသညျခဲ့သညျ။ သူသညျဘုရားသခငျကြောင့်ဘုရားသခင့ထင်ဘယ်လောက်သိတယ်: "ငါနှင့်မညျးတျောကိုတစျခုပါ။ " (ယောဟန် 10:30, င်း ) ။
ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့အားလုံးကူးယူနိုင်ပါတယ်, မိမိပြုသောပဌနာဘဝတစ်လျှောက်လုံးတစ်ပုံစံသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နာခံမှုခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအဘခမည်းတော်၏အများနှင့်အညီမိမိအလိုဆန္ဒများကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၏ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြုပါသို့မဟုတ်လကျခံဖို့လိုလိုလားလားရှိရာအရပ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ဆုတောင်းပဌနာအတွက်အလှညျ့အပွောငျးရောက်ရှိပါပြီ။ "ကျွန်မရဲ့အလိုတော်လုပ်ဖို့ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်လုပ်ဖို့မဟုတ်သည်မိုဃ်းကောင်းကင်မှဆင်းလာကြပြီဖြစ်သည်။ ": ယရှေုနေထိုင်ခဲ့ (ယောဟန် 6:38, င်း)
ကျနော်တို့တပ်မက်တစ်ခုခုလိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျော်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ရွေးချယ်ခြင်းဒီတော့ခက်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအရေးမပါဘူးဆိုရင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် agonizing ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိစ္စပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုကျနော်တို့အတွက်ပေးနိုင်ပါသည်မျှမဖြစ်နိုင်သောလမ်းလည်းမရှိကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းကိုသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၏ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မှတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သူ့မေတ္တာသည်သန့်ရှင်း၏သောယုံကြည်ခြင်းရှိသည်။ ဘုရားသခငျသညျစိတျနှလုံးအမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်, သူသည်အစဉ်အမြဲအဘယ်သူမျှမကိစ္စကအချိန်မှာပေါ်လာမည်ကိုမည်သို့, ငါတို့အဘို့အများဆုံးအကျိုးရှိသည်အဘယ်အရာပါဘူး။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရန် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မှလက်နက်ချ , ငါတို့သည်လည်း "ကျွန်မယုံကြည်ပြုကြလော့ကြှနျုပျမယုံကြည်သောကျော်လွှားကူညီ!", တစ်ဦးနေမကောင်းသူငယ်၏ဖခင်ယေရှုအားပြုသကဲ့သို့အော်ဟစ်ရန်ရှိသည် (မာကု 9:24, င်း)
သင်ကရော့ခ်အောက် Hit ခင်မှာ
ကြောင်းဖခင်ကဲ့သို့ပင်, ကျွန်တော်တို့အများစုကကျနော်တို့ရော့ခ်အောက်ခြေထိမှန်ပြီးမှသာဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့၏အလိုတော်လက်နက်ချ။ ငါတို့သည်နောက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်နှင့်ဘုရားသခငျသညျနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်တဲ့အခါကျနော်တို့ငွိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအရှုံးမပေးနဲ့သူ့ကိုကျော်ယူကြကုန်အံ့။ ထိုသို့လမ်းဖြစ်မရှိပါ။
သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့စတငျနိုငျသညျ ဘုရားသခငျသညျကိုးစား သောအရာတို့ကိုထိန်းချုပ်ထဲကရမီ။ သင်သည်သင်၏ပဌနာအတွက်သူ့ကိုစမ်းသပ်လျှင်သူမှားမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျစုံလင်သောမေတ္တာ၌သင်တို့အဘို့ကိုထုတ်ကြည့်ဠာ၏အားလုံးသိရှိ, All-အစွမ်းထက်အနန္တတန်ခိုးရှင်ရှိတယ်သောအခါ, အစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သည်းအရင်းအမြစ်များကသူ၏အလိုတော်ကိုမှီခိုအားအသိပါစေဘဲနေရသနည်း
ကျွန်တော်ကျရှုံးဖို့အလားအလာရှိပါတယ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းထားသောဤကမ္ဘာကြီးထဲမှာအရာအားလုံး။ ဘုရားသခငျသညျမ။ သူကသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူသဘောမတူဘူးလျှင်ပင်တသမတ်တည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူ့အလိုတော်အတွက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူဟာအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နေသည်။
ထဲမှာ သခင်ဘုရား၏ဆုတောင်းချက် , ယရှေု "သင်၏အမှုကိုပြုပါလိမ့်မည် ... ။ " သူ့ခမည်းတော်အားဆို၏ (မဿဲ 6:10, င်း) ။
ဒါဟာသင့်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး, ငါ့အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခနှင့်သူ၏အလိုတော်အကြောင်းကိုပါပဲ။ အဆိုပါရှိရာသို့အလျင်အမြန်ကျနော်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးဘာမျှမဖြစ်နိုင်တာဘယ်သူကိုဖို့ One ၏နှလုံးကိုထိမိမည်ကိုလေ့လာပါ။
Big ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်: တစ်ဦးကဓာတ်ပုံပြခန်း
အိမ် Syle (တည်းဖြတ်)
အဘယ်အရာကိုသင်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်အပေါ်တစ်ဦးပြားတုရုမြို့ Get အကယ်. ပြုပါရန်
နက်ရှိုင်းသောခွက်ဘီး: နယူးဒီဇိုင်း Trend
ရောဘတ် Frost ကန့်က 'ညနှင့်အတူအသိအကျွမ်း' '
Glade plug-ins Air ကိုအမြင်ကြည်လင်စေရန်တစ်ဦးမီးဘေးဇက်?
မရှိမဖြစ်သစ်ပင်စောင့်ရှောက်မှုသိကောင်းစရာများ - သင်၏ Tree ကျန်းမာရေးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ